Ungazikhetha njani ezona nkqubo zibalaseleyo zokwenza umculo | Ndinike ixesha lokuphola
Ezona nkqubo zibalaseleyo zokwenza umculo
Iindaba zoMculo | | Iindaba zomculo, umculo
Ukuba sithandana qala kwihlabathi lemveliso yomculo, okanye sineziphiwo zokuqamba, senza iqela lomculo okanye nayiphi na enye indlela, kufuneka sazi iinkqubo ezahlukeneyo ezikhoyo ukwenza umculo.
Ezi ntlobo zeenkqubo, eziyilelwe ukwenza umculo, kunye nezinye izixhobo ezifanayo, azikaze zibize kakhulu okanye zifikeleleke. Ngokufika kwe ubuchwepheshe obutsha, zininzi iindlela esinokukhetha kuzo namhlanje ukwenza umculo, Lonke uhlahlo-lwabiwo mali nazo zonke iipokotho.
1 Yintoni inkqubo yokwenza umculo?
2 Iikhrayitheriya zokukhetha eyona nkqubo ibalaseleyo yokwenza umculo
3 Loluphi uhlobo lokuyila oluya kusetyenziselwa le nkqubo?
4 Ezona nkqubo zibalaseleyo zokwenza umculo, izimvo
4.1 IGARAGEBAND APLE
4.2 I-FL STUDIO
4.3 IZIXHOBO ZENKQUBO
4.5 ABLETON PHILA
4.6 IPHEPHA LENKQUBO X
Yintoni inkqubo yokwenza umculo?
EsiNgesini kusetyenziswe isifinyezo esithi DAW, Indawo yokuSebenza yeDijithali. Imalunga ne- Inkqubo eyilelwe ukuhlela, ukurekhoda, ukuxuba kunye nokwenza kakuhle yeefayile zedijithali yeaudiyo.
Esi sixhobo sisetyenziselwa nyusa naluphi na uluvo ukuya kwinqanaba lemveliso yomculo, ngokungathi yayiyilaphu engenanto apho umzobi anokuvula khona ukucinga kwakhe.
Ngokusetyenziswa kwe-DAW, kunokwenzeka ukuba urekhode zonke iintlobo zezixhobo zomculo, uhlele iingoma, ungeze izixhobo ezibonakalayo, ulungiselele kwakhona, usike, uncamathisele, uhlele, ukongeza iziphumo, emva koko udibanise kwaye uyile indalo yethu.
Ukongeza kwizixhobo eziyimfuneko zekhompyuter, I-DAW lelona candelo libalulekileyo lemveliso yomculo. Ngezi zinto zimbini, ezona ngoma zinzima zinokudalwa.
Nangona izixhobo ze-analog ezinamandla amakhulu zisasetyenziswa ngabenzi abathile bomculo, ezinje ngeesampuli zohlobo lwe-Akai MPC, imeko iya isiya iinkqubo zedijithali zokwenza umculo.
Iikhrayitheriya zokukhetha eyona nkqubo ibalaseleyo yokwenza umculo
Ekukhetheni eyona DAW kufuneka uqwalasele iimfuno kunye nokukhethwa komsebenzisi ngamnye, kwaye ngenxa yoko ukhethe olona khetho lufanelekileyo.
El uhlahlo lwabiwo mali olukhoyo. Ukuthenga inkqubo yokwenza umculo kutyalo-mali olwenziwe iminyaka emi-4 okanye emi-5, nangaphezulu. Nangona sonke sicinga ngokonga kangangoko sinakho ekuthengeni, kufuneka sijonge ixesha elide.
Vavanya imveliso. Ayizizo zonke iinkqubo zokwenza umculo ezifanelekileyo kuzo zonke iimfuno. Kodwa uninzi lwabavelisi banikezela iimvavanyo zasimahla zeenkqubo zabo zokuvavanya inkqubo kunye nokuvavanya ukuba ziyahlangabezana neemfuno kakuhle.
La iqonga lokusebenzisa. Uninzi lweenkqubo zokwenza umculo ziphuhlise iinguqulelo zamaqonga awaziwayo naziwawayo. Kodwa kukwakho neenkqubo Ii-DAWs ezisebenza kuphela kumaqonga athilengokomzekelo imeko ye Ingqondo X Pro. Le nkqubo iyahambelana kuphela kwiikhompyuter zeMAC.
El inqanaba lomculo kunye nomgangatho wesiphumo. Ukuba inqanaba li-amateur okanye i-novice, ukhetho oluphambili lweenkqubo alunyanzelekanga ukuba lwenze umculo we-DAW. Ezona zilungileyo zezi iinkqubo eziqondakala ngokulula, kwaye zihlangabezana neemfuno, ngaphandle kokungaphezulu. Sebenzisa inkqubo yeengcali kwasekuqaleni kunokudala ixesha elininzi lokufunda kunye nokuxhotyiswa.
Loluphi uhlobo lokuyila oluya kusetyenziselwa le nkqubo?
Xa sifumana inkqubo yokwenza umculo, kubalulekile ukucinga ngenqanaba esinalo, njengoko sele sibonile. Kodwa kufuneka hlalutya ikamva kunye namandla enkqubo yokuziqhelanisa nezinto esiza kuzifuna.
Omnye umbuzo obalulekileyo ekufuneka sithathe isigqibo ngawo ukuba sizimisele ukwenza into bukhoma. Ukuba kunjalo, uninzi lwesoftware lulunge ngakumbi ekusebenzeni bukhoma kunabanye kwaye baneempawu ezizodwa zoku. Ngokuchasene noko, ezinye izixhobo ziyilelwe ukusebenza kwisitudiyo somculo.
Ezona nkqubo zibalaseleyo zokwenza umculo, izimvo
Okwezo abantu abanamava athile omculo, kwinqanaba lobungcali okanye le-amateur, IGarageban lukhetho oluhle kakhulu. Iikhompyuter ezintsha zeMac sele zinayo le nkqubo zidityanisiweyo, kwaye inokukhutshelwa nangamaxabiso asezantsi.
Kwiinkqubo zayo, iGarageban ivumela nawuphina umsebenzisi uhamba phakathi kwamathala eencwadi kunye nezixhobo, kwaye wenza umculo. Ngaphandle koko, inazo zonke izixhobo ezisisiseko sokwenza umculo kunye nemveliso.
Esi sixhobo sibonelela Ikhithi yegubu esebenzayo, eyilelwe ukuvelisa isingqisho ngokuzenzekelayo, ulawulo olululo eququzelela kakhulu ukuhlelwa kwesandi kwaye ikwanesicelo se "Logic Remote" solawulo lweeparitha nge-iPad.
I-Studio yeFL yaqala indlela yayo kwilizwe leenkqubo zomculo njengeFruity Loops, a umhleli wenyathelo iseti ethandwayo / isingqisho / iseti yeluphu, eyaqala ukusetyenziswa ngamagcisa amaninzi kunye nabavelisi kwihlabathi liphela.
Okwangoku, kwaye njengendaleko enkulu, I-Studio yeFL yenye yezona DAWs zigqibeleleyo kwintengiso.
Inguqulelo yamva nje ephume kulo nyaka imele Olunye lolona hlaziyo lubaluleke kakhulu lwenkqubo kwiminyaka. Igalelo ujongano lomsebenzisi olunomdla olubonisa kakuhle kwizimonitha zesisombululo esiphakamileyo, umxube oxutywe ngokutsha kunye nohlaziyo lweeplagi zayo zesoftware.
Kubo bonke abasebenzisi, lukhetho lobulumko ukuqala kwihlabathi lobugcisa lendalo yomculo. Phakathi kwezibonelelo zayo kukukhululeka kokuqala ukusebenza nezixhobo zefektri kunye neelayibrari kunye nekhonkco efanelekileyo yokuxuba.
Inayo inzuzo yokuba inikeza uhlaziyo lwasimahla yobomi kuye wonke umntu othenga ilayisensi yakho.
Le yinkqubo eyaziwayo yokwenza umculo kushishino lwesoftware yokurekhoda. Kwinguqulelo yayo yamva nje, Ukuphathwa lula kunye nokusetyenziswa, ukudlala kunye nokurekhoda amandla kuyandiswa. Ukuqaqambisa eyakho injini yesandi.
Sebenzisa iCubase ukwenza umculo ivela ngo-1989. Abenzi bayo baguqukele kwanamhlanje, kwaye baphuhlisa esinye sezixhobo eziphambili zokudala umculo kwiimvumi kunye nabavelisi.
Le nkqubo yifayile ye- isixhobo sobuchwephesha esigcina ukuvela kumacala anomdla ukwenza isixhobo esikhulu sokuyila.
Nangona iziqalo ezithandwayo ziphantsi, ngenxa yohlaziyo oluqhubekayo kunye nomgangatho wemveliso yomculo, ibisenza umohluko kwaye Esi sixhobo siye saba sesinye seyona software idumileyo yokudala umculo namhlanje.
IPHEPHA LENKQUBO X
La isindululo seapile yemveliso yomculo. Enye yesoftware enamandla kakhulu, esele ikhula uphuculo oluninzi kwiminyaka yakutshanjeUkusuka kwimiboniso yesisombululo esiphakamileyo, ukwandisa ilayibrari yesandi, isixhobo esitsha, kunye nokunye.
Imithombo yemifanekiso: UmvelisiDJ / iTunes-Apple
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Ezona nkqubo zibalaseleyo zokwenza umculo
Ngoku sinokonwabela i-trailer entsha yeBlade Runner
Ezona bhanyabhanya zibalaseleyo zabantwana ngalo lonke ixesha